Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny fividianana mpanjifa YouTube?
Mamporisika ny hafa hisoratra anarana amin'ny fantsonao
Miraikitra ny mpanjifa ary tsy hesorina
Fandefasana azo antoka sy azo antoka
Manomboka ao anatin'ny 24-72 ora ny valiny
Raiso na aiza na aiza amin'ny mpanjifa 10-100 isan'andro
Mihoatra noho ny nobaikoinao hatrany no ampitainay!
Ny antony lehibe indrindra tokony hiheveranao hividianana mpanjifa YouTube
Te ho YouTuber? YouTube dia hery ara-tsosialy sy tranga manerantany izay mahasarika mpijery an'arivony tapitrisa manerana izao tontolo izao. Na orinasa efa miorina ianao, na vao manomboka, na te hampiseho ny talentanao, YouTube no sehatra tonga lafatra hanatrarana ny tanjonao amin'ny varotra.
Ny maha-Youtuber mahomby dia tafiditra ao amin'ny fananganana ny fototry ny mpanjifanao ary ny fahazoana fizarana, tia ary fanehoan-kevitra be dia be. Na dia zava-dehibe aza ny metrika toy ny fizarana, fijerena horonan-tsary, ary fanehoan-kevitra, dia mbola zava-dehibe kokoa ny fampitomboana ny isan'ny mpanjifanao.
Hanampy ny famoronana votoaty manara-penitra, fa ny horonan-tsarinao dia mety hilevina ao anatin'ireo horonan-tsary mitovitovy - na tsara kokoa kokoa izay ampiakarina isan'andro ao amin'ny YouTube. Raha ny marina, mihoatra ny 500 ora ny votoaty horonan-tsary ampidirina isa-minitra, ary ora iray lavitrisa ora no jerena isan'andro ao amin'ny YouTube.
Ny fomba haingana indrindra hampitomboana ny isan'ny mpanjifanao dia ny mividy mpanjifa YouTube avy amin'ny orinasam-pandraharahana ara-barotra YouTube malaza.
Ity misy fijerena akaiky ny mahatonga ny YouTube ho fitaovana ara-barotra malaza sy ny antony lehibe tokony hividiananao mpanjifa.
Inona no mahatonga ny YouTube ho fitaovana ara-barotra malaza?
Ny fanadihadiana tamin'ny 2021 nataon'ny Pew Research Center dia nanambara fa YouTube no sehatra malaza indrindra any Etazonia, ary ny ankamaroan'ny Amerikanina dia tia azy io noho ny fantsona hafa.
Nanomboka tamin'ny 2005 rehefa natomboka, YouTube dia nanangana toerana matanjaka manerana ny firenena an-jatony manerana izao tontolo izao, mandrakotra ny 95% amin'ny mponina amin'ny aterineto.
Ireto misy zava-misy sy tarehimarika mahagaga hafa nataon'i SEM Rush izay mampiseho ny antony maha-safidy mazava ho an'ny mpivarotra ny YouTube:
YouTube dia manana mpampiasa 2 lavitrisa isam-bolana manerantany.
Lahatsary dimy lavitrisa ao amin'ny YouTube no jerena isan'andro izay midika ho adiny iray lavitrisa fanjifana atiny isan'andro.
74 isan-jaton'ny olon-dehibe amerikana no mijery horonan-tsary YouTube.
Mandany efapolo minitra amin'ny antsalany amin'ny horonan-tsary YouTube ny mpijery.
Amin'ny 2022, tombanana ho 210 tapitrisa ny olona hijery horonan-tsary YouTube any Etazonia
Ankoatra ny Millennials, ny demografika mitombo haingana indrindra dia ahitana ny 50 ka hatramin'ny 65 taona (Baby boomers) ary ny 36- hatramin'ny 49 taona (Generation X).
Tamin'ny taona 2019, olona 2 lavitrisa eran-tany no niditra sy nijery horonan-tsary YouTube adiny iray lavitrisa isan'andro.
Manodidina ny ampahefatry ny fifamoivoizan'ny horonan-tsary eran-tany ny YouTube, faharoa aorian'ny Netflix.
Ankoatra ny fialam-boly, mijery horonan-tsary YouTube ny olona mba hahazoana vaovao, fampahalalana, manamafy ny asa matihanina, ary manaraka ireo orinasa sy marika.
Olona enina amin'ny folo no tia mijery horonan-tsary amin'ny fahitalavitra mivantana
Antony lehibe hividianana mpanjifa YouTube
YouTube dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo sehatra tsara indrindra hanehoana ny talentanao na hanaparitahana ny asanao. Ny 'YouTubers' nahomby dia ny sasany amin'ireo olona fanta-daza indrindra amin'ny Internet. Na mandefa horonan-tsarimihetsika kilalao izy ireo, vlogs fitsangatsanganana, na horonan-tsary 'fomba ahoana', ireo YouTubers malaza ireo dia nanangana ny marika ary mampiseho ny asany ao amin'ny YouTube. Ny dingana voalohany hahatongavana ho YouTuber mahomby dia ny fahazoana laza.
Ny sasany amin'ireo sokajy video malaza indrindra ao amin'ny YouTube dia:
Famerenana ny vokatra - Nanomboka tamin'ny taona 2017, ny mpijery YouTube dia nijery horonan-tsarimihetsika vokatra 50,000 miampy taona amin'ny fitaovana finday. Ny hevitra azo itokisana dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fandrisihana ny mpanjifa hanao fividianana. Ny horonan-tsary momba ny vokatra dia ahafahan'ny mpihaino mahita ny fahombiazan'ny vokatra iray ary mahazo valiny avy amin'ny mpandinika.
Fanaparitahana horonan-tsary – Nanjary nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fanapahan-kevitry ny mpijery amin'ny fividianana ireo horonan-tsary momba ny fandefasana boaty. Izy ireo koa dia fomba mahomby ho an'ny marika hanaparitahana ny vokatra na serivisy vaovao.
Lahatsary fanabeazana - Tian'ny mpijery ny horonan-tsary YouTube momba ny fironana lamaody, ny zavakanto hita maso, ny tantara, ny matematika, ny orinasa ary ny lohahevitra hafa.
Lahatsary fanamby – Avy amin'ny 'The Highlighter Challenge' ka hatramin'ny "Zava-misy mahafinaritra sy kisendrasendra momba ahy", ny tag sy ny horonan-tsary fanamby dia malaza be. Ity endrika lahatsary ity dia mandrisika ny mpampiasa hijery ireo mpamorona manao ny fanamby amin'ny fomba miavaka.
Comedy – Ny horonan-tsary hatsikana dia anisan'ireo endrika manana vintana lehibe ho tonga 'viral'.
lalao – Manomboka amin'ny 'Minecraft' ka hatramin'ny 'League of Legends', sokajy malaza ao amin'ny YouTube ny horonan-tsary lalao.
Vlogs – Vlogs na bilaogy video dia ahafahan'ny mpanaraka mahita ny 'tena' anao sy mifandray aminao. Mazàna ny vloggers ambony dia manana mpanjifa an-tapitrisany.
Na dia manao horonan-tsary avo lenta aza ianao ao amin'ny niche anao ary mametraka izany, dia tsy misy antoka ny fahombiazana eo noho eo. Mety ho toa ny YouTubers viraliny no manana tsiambaratelo, raikipohy majika ho lazan'ny aterineto eo noho eo. Mandrakitra horonan-tsary sy lahatsoratra fotsiny izy ireo, ary mijery sy mpanjifa an-tapitrisany no manaraka. Na dia mety hiasa ho an'ny olo-malaza sy fantsona malaza aza izany, ny vao manomboka dia mila mitsambikina amin'ny alàlan'ny fividianana mpanjifa YouTube.
Heverina ho “tsara” ny horonan-tsary YouTube iray raha manana CTR (tahan'ny tsindrim-peo) mihoatra ny 10 isan-jato, fitazonana 50 isan-jato, ary efatra minitra amin'ny salan'ny fotoana fijerena.
Ny tahan'ny click-through na ny CTR dia kajy amin'ny fizarana ny isan'ny kitika amin'ny horonan-tsaryo amin'ny tsindrimandry thumbnail (video teaser). Ohatra, raha jerena in-1,00 ny thumbnail-nao ary olona 10 no manindry ilay horonan-tsary, dia 10 isan-jato ny tahan'ny click-through.
Arakaraka ny isa ny isan'ny mpanjifa amin'ny kaonty YouTube no tsara kokoa ny vintana hampitombo ny CTR, fitazonana ary ny fotoana fijerena.
Araka ny tombantombana dia mety haharitra roa taona vao mahazo mpanjifa arivo voalohany ao amin'ny YouTube. Ity dia mety ho traikefa miadana sy mahasosotra ho an'ny olona izay mikasa ny hanao ny marika haingana amin'ny fantsona.
Rehefa mividy mpanjifa YouTube ianao dia azonao atao ny manangana sy mitazona ny fotoana. Ny fividianana mpanjifa YouTube dia handefa hafatra amin'ireo mpampiasa YouTube hafa koa fa malaza sy manan-danja ny atiny.
Raha vao tafatsangana ny isan'ny mpanjifanao dia hahasarika olona maro kokoa hijery ny horonan-tsaryo sy hisoratra anarana amin'ny fantsonao.
Mandehana amin'ny finday mba hanitarana ny tanjonao
Manana paikady ara-barotra amin'ny fantsona maro ve ianao? Ny marketing amin'ny finday dia paikady ara-barotra nomerika izay mikendry ny hanatratra ny mpihaino amin'ny fitaovana finday, anisan'izany ny takelaka sy ny finday. Statista dia manombatombana fa misy Amerikana 290 tapitrisa izay mpampiasa finday amin'ny taona 2020 hatreto. Raha jerena ny fidiran'ny smartphone amin'ny 79.10 isan-jato, Etazonia no fahefatra eran'izao tontolo izao amin'ny resaka tompona finday.
Miaraka amin'ny mpanjifa mampitodika ny sainy amin'ny fitaovana finday, ny mpivarotra dia manao laharam-pahamehana ny fandraisana anjara amin'ny omnichannel amin'ny mpihaino kendrena amin'ny marketing finday. Ny marketing amin'ny finday dia mety ahitana ny fandefasana hafatra marika amin'ny alàlan'ny SMS na antso mangatsiaka. Ireo paikady marketing push ireo dia samy manana ny tsy fahampiana maharitra sy fohy. Afaka manakana mora foana ny antso sy manosika doka ny mpanjifa. Ho an'ny mpivarotra, ny fanaraha-maso ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola sy ny fikajiana ny mpanjifa manokana dia lasa sarotra amin'ny push marketing.
Ny YouTube dia mety tsara amin'ny fomba fiasa ara-barotra miditra na misintona amin'ny fitaovana finday. Amin'ny alàlan'ny marketing inbound, ny marika dia afaka miditra sy manasa ny mpanjifa kendreny ary manorina fifandraisana matanjaka.
Ireo tarehimarika avy amin'ny HubSpot ireo dia mampiseho ny antony maha-safidy tsara indrindra amin'ny varotra finday ny YouTube:
Ny ankamaroan'ny olon-dehibe (75 isan-jato) dia mijery horonan-tsary YouTube amin'ny findainy.
Mahatratra olona betsaka kokoa ao anatin'ny sokajin-taona 18 ka hatramin'ny 49 taona amin'ny fitaovana finday ao anatin'ny herinandro ny YouTube raha oharina amin'ny tambajotra tariby rehetra.
Maherin'ny telo ampahefatry ny fotoana ijerena YouTube dia amin'ny fitaovana finday.
Ny fanadihadiana Google dia mampiseho fa ny mpampiasa finday avo lenta dia 1.4 heny kokoa amin'ny fijerena votoaty na doka misy marika ao amin'ny YouTube.
Hitan'ny mpikaroka ihany koa fa ny mpijery horonan-tsarimihetsika smartphone dia mahatsapa kokoa ny mifandray amin'ny marika manolotra votoaty video amin'ny fitaovana finday raha oharina amin'ny mpijery fahitalavitra. Ary ambonin'izany rehetra izany, ny fanadihadiana tamin'ny 2020 dia nampiseho fa 70 isan-jaton'ny mpijery no nividy rehefa avy nahita ny lahatsarin'ilay marika tao amin'ny YouTube.
Ny hetsika hafa ataon'ny mpijery rehefa avy nijery horonan-tsary misy marika amin'ny findainy dia ahitana:
Tsidiho ny tranokala na fivarotana marika.
Miresaha momba ny marika amin'ny hafa.
Hanova tsara ny hevitr'izy ireo momba ny marika, serivisy, na vokatra.
Zarao ny atiny video misy marika momba ny serivisy, vokatra, na orinasa.
Ny fomba marani-tsaina amin'ny famoronana tetikady ara-barotra finday mpandresy dia ny famoronana horonan-tsary misy marika ao amin'ny YouTube ary hampiroborobo azy ireo amin'ny mpihaino midadasika kokoa amin'ny fividianana mpanjifa YouTube. Ny olona dia eo am-pitadiavana famantarana hanapa-kevitra izay hojerena amin'ny media sosialy sy ny karazana votoaty mendrika ny fotoanany. Raha manana mpanjifa an'arivony ny kaontinao YouTube, dia misongadina amin'ny maha-kaonty malaza izay arahin'ny olona maro.
Amboary ny ezaka ataonao amin'ny varotra
Ho an'ny marika, ny fananana paikady ara-barotra YouTube no laharam-pahamehana. Manampy amin'ny fampitomboana ny fitadidiana sy ny fitadidiana marika ny horonan-tsary mahasarika satria ny sary dia voahodina haingana kokoa raha oharina amin'ny hafatra an-tsoratra. Ny horonan-tsary YouTube dia afaka manampy ny orinasanao hitarika fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao na fivarotana e-varotra, hampitombo ny fiovam-po ary hahatratra ny fototry ny mpihaino. Ny fisian'ny YouTube dia manamora ny fitadiavana anao amin'ny milina fikarohana ihany koa ny mpihaino kendrenao. Afaka mandefa hetsika mivantana amin'ny YouTube mivantana ianao. Izany dia mampiharihary ny marika sy ny vokatrao na ny serivisinao amin'ny mpihaino midadasika kokoa amin'ny fomba mahomby.
Ny paikadin'ny marketing YouTube anao dia manana vintana lehibe hanome anao ny vokatra tadiavina rehefa manana fototra mpanjifa matanjaka ianao.
Ny fividianana lisitry ny mpanjifa YouTube dia fomba tsara hanampiana ny ezaka ara-barotra YouTube anao. Manampy anao hahazo mpanaraka vaovao tsy ho ela izany ary hahazoana j'aime, fanehoan-kevitra ary fizarana. Miaraka amin'ny mpanjifa bebe kokoa, afaka manangana lisitra mailaka be dia be ianao izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampitomboana ny fiovam-po sy ny fandraisana anjara.
Ny lisitry ny mpanjifa dia manome fitarihana mafana izay azonao ampiasaina hanaraha-maso, handraisana anjara ary hiova ho mpanjifa amin'ny farany. Ny isan'ny mpanjifa YouTube dia iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja. Ny fividianana mpanjifa mavitrika YouTube dia manampy ny orinasanao hahazo fankasitrahana bebe kokoa. Arakaraka ny isa isa ny mpanjifanao no matanjaka kokoa ny lazanao sy ny fahatokisanao izay afaka mahasarika mpanjifa organika bebe kokoa amin'ny fantsonao.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny olona maro hanomboka fantsona YouTube dia ny hahazoana vola. Ny isan'ny fantsona ao amin'ny YouTube mahazo isa enina isan-taona dia nitombo 40 isan-jato isan-taona raha nitombo 10,000 isan-jato kosa ny fantsona mahazo $50 isan-taona.
YouTubers mahomby maro no mahazo fidiram-bola enina amin'ny YouTube. Ohatra, YouTuber famatsiam-bola manokana Nate O'Brien dia manana mpanjifa 1.1 tapitrisa ary nahazo $444,000 tamin'ny fidiram-bolan'ny dokam-barotra tao anatin'ny herintaona. Ny kintan'ny YouTube ambony toa an'i PewDiePie sy Smosh dia mahazo $8.5 tapitrisa ka hatramin'ny $12 tapitrisa.
Raha te-hanao vola amin'ny YouTube ianao dia mila manana mpanjifa arivo farafahakeliny ao anatin'ny roa ambin'ny folo volana farany ary koa ora 4000 fijerem-bahoaka. Rehefa mahazo ireo mpanjifa marobe ireo ianao dia mahazo ny programa mpiara-miasa izay atolotry ny YouTube. Izany dia ahafahanao mahazo fidiram-bola amin'ny famandrihana, doka, fivarotana entana, ary mpikambana ao amin'ny fantsona.
Google AdSense: Ny fiaraha-miasa dia manome anao fahafahana miditra amin'ny fitaovana ahafahanao manangom-bola amin'ny Google AdSense. Ny ankamaroan'ny olo-malaza YouTube dia mahazo ampahany betsaka amin'ny fidiram-bolany avy amin'ny Google AdSense. Ohatra, raha manana mpanjifa 1,000,000 mijery roa amin'ireo horonan-tsaryo ao anatin'ny herinandro ianao dia afaka mahazo hatramin'ny $36,000 amin'ny AdSense irery.
Araka ny tombantombana, ny fijerena 20,000 isan'andro dia afaka manampy anao hahazo eo anelanelan'ny $28 ka hatramin'ny $47 isan'andro amin'ny antsalany, ary ny vola miditra isam-bolana dia $460 hatramin'ny $769. Raha tsy miova ny isan'ny fijerena isan'andro dia afaka mahazo $5,600 hatramin'ny $9,353 isan-taona ianao.
Varotra varotra: Afaka mivarotra entana roa ambin'ny folo ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny YouTube amin'ny alàlan'ny fampandehanana ity endri-javatra ity ao amin'ny kaonty YouTube. Ny olo-malaza sasany dia nahazo vola an-tapitrisany tamin'ny fivarotana entana tamin'ny mpankafy azy. PewDiePie, kintan'ny lalao video Soedoà, dia manana mpanjifa 98 tapitrisa ao amin'ny YouTube ary mahazo $6.8 tapitrisa isam-bolana amin'ny fivarotana entana. Azonao atao koa ny mampiroborobo ny entanao/vokatrao amin'ny fantsonao.
Fandraisana anjara amin'ny fantsona: Rehefa mahazo mpanjifa 1000 ao amin'ny fantsona YouTube-nao ianao dia afaka mahazo vola ihany koa amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny endri-javatra maha-mpikambana ao amin'ny kaontinao. Manao fandoavam-bola isam-bolana ny mpanaraka anao sy ny mpankafy anao mba hahazoana votoaty bonus, ao anatin'izany ny chat mivantana, horonan-tsary manokana ary marika. Mahazo $40,000 isam-bolana amin'ny alalan'ny maha-mpikambana amin'ny fantsona ireo mpamorona horonantsary ambony ao amin'ny YouTube.
Marketing marketing: Miankina amin'ny niche anao, azonao atao koa ny manova ny loharanon-karenanao miaraka amin'ny marketing marketing, fanohanana ara-bola ary fampianarana an-tserasera. Mandoa vola ho an'ny YouTubers ny orinasa mba hampiroboroboana ny marika na ny vokatra ao amin'ny fantsona. Ireo mpamorona YouTube malaza dia mitovy, raha tsy mahomby kokoa amin'ny fampiroboroboana ny fahafantarana ny marika raha oharina amin'ny olo-malaza sy ny influencers. Ireo mpikatroka YouTube dia mazàna mandidy vidiny ambony kokoa mba hampiroboroboana marika raha oharina amin'ny lahatsoratra Instagram. Afaka mahazo $2000 isaky ny horonan-tsary ianao raha manana mpanjifa 100k.
Araka ny fanadihadiana iray, ny influencer antonony dia mitentina $2,000 isaky ny mpanjifa 100,000 mba hampiroboroboana marika ao amin'ny kaontiny YouTube.
Manintona mpanjifa tena izy
Ny mpivarotra dia mampiasa ny antsoina hoe 'toe-tsain'ny omby' mba hampiroboroboana ny varotra sy ny fandraisana anjara. Ny toe-tsaina omby dia manondro ny fomba fitaomana ny olona hanao zavatra satria ny ankamaroan'ny olona dia manao izany.
Amin'ny maha-biby ara-tsosialy antsika dia miantehitra amin'ny fampahalalana avy amin'ny hafa isika mba handraisana fanapahan-kevitra. Avy amin'ny safidy momba ny asa, ny fironana ara-politika ka hatramin'ny fitafiana, ny fironanay dia mazàna novolavolain'ny fandinihana ara-tsosialy. Ny psikology dia nandinika ny fomba namolavolan'ny paikady fianarana sosialy ny faharanitan-tsain'ny olombelona.
Hitan'izy ireo fa mirona maka tahaka ny hafa ny olona, ​​ary arakaraka ny hamaroan'ny isan'ny olona nanao safidy iray no vao mainka naka tahaka azy ireo. Toy izany ihany koa ny fomba isafidianan'ny olona ny fampiharana mifototra amin'ny tarehim-pisintonany na ny fanarahana ny kaonty media sosialy izay manana mpanaraka betsaka. Marina ihany koa fa rehefa mikaroka sy mahita horonan-tsary misy mpanjifa sy mpijery ary tia azy ny olona dia manapa-kevitra ny hanaraka an'io video io. Rehefa hitan'ny mpijery fa ambany ny fahafahan'ny horonan-tsary iray, dia mirona hihevitra izy ireo fa tsy mendrika hojerena ilay atiny. Mety handroso haingana izy ireo ary hikaroka horonantsary mitovy amin'izany avy amin'ny fantsona YouTube malaza kokoa izay manana mpijery betsaka kokoa.
Ny tsy fahampian'ny mpanjifa amin'ny fantsona YouTube anao dia hampidina ihany koa ny vintana hahazoan'ny horonan-tsary tianao, fanehoan-kevitra, na fizarana satria tsy azon'ny mpijery hoe loharanom-baovao azo itokisana izy io. Rehefa mandoa vola ho an'ny mpanjifa ianao, dia hanatsara ny fahafahan'ny olon-kafa ho lasa mpanaraka sy mpanjifanao noho ny 'toe-tsain'ny omby'.
Mijoroa ho manam-pahefana
Ny iray amin'ireo antony lehibe hividianana mpanjifa YouTube dia ny hanamafisana ny fahefan'ny marikao manokana. Ny fananana mpanjifa bebe kokoa amin'ny fantsona YouTube anao dia midika fa mpilalao matotra ianao amin'ny niche raha ampitahaina amin'ny mpanjifa vitsivitsy. Araka ny nasongadina etsy ambony, ny mpanjifa lehibe kokoa dia manokatra anao hahazoany vola bebe kokoa, miara-miasa amin'ireo matihanina sy mpitaona hafa.
Araka ny fanadihadiana tamin'ny taona 2019 nataon'ny SEM rush, 48 isan-jaton'ny olona no mino fa ny YouTube no ho mpandray anjara ambony indrindra hanamafisana ny fahombiazan'ny fifandraisana amin'ny daholobe mandritra ny dimy taona ho avy. Na eo amin'ny PR, lamaody, fikarakarana hoditra, fitantanam-bola, lalao, na hatsikana, ny fahazoana mpanjifa bebe kokoa amin'ny YouTube dia afaka manampy anao hijoro ho manam-pahaizana momba ny indostria.
Ahena ny ezaka
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fahombiazanao amin'ny maha YouTuber anao ny mpanjifa. Avy amin'ny fahafahana mahazo vola, ny fanitarana ny fidirana, ny fahazoana laza amin'ny tambajotra, ny isan'ny mpanjifa be dia be dia manome tombony maro. Ho an'ireo vao miditra ao amin'ny lampihazo, ny fahazoana mpanjifa sy ny fananganana fahatokisana dia mety ho sarotra. Mitaky ezaka tsy tapaka izany nefa mandany fotoana hahazoana mpanaraka 1000 voalohany. Araka ny asehon'ny fanadihadiana dia mety haharitra roa taona mahery vao mahazo mpanjifa arivo.
Ny fampitomboana ny isan'ny mpanjifa ao amin'ny YouTube dia mety tafiditra ao anatin'izany ny fijerena akaiky ny kalitaon'ny horonan-tsary, ny fatran'ny fampiakarana, ny fanatsarana ny milina fikarohana (SEO) mba hanamafisana ny laharan'ny fikarohanao sy ny paikady hafa. Na dia ilaina aza ireo ezaka ireo, dia mila manokana fotoana betsaka ianao mba hahazoana tsara ny lafiny rehetra amin'ny horonan-tsarinao YouTube. Na dia eo aza ny fanaovana horonan-tsary manara-penitra sy mahasarika, dia mety tsy hisy mpanjifa firy mandritra ny taona vitsivitsy voalohany.
Rehefa mividy mpanjifa ianao dia hanampy amin'ny fananganana ny fototry ny mpanaraka anao amin'ny fotoana haingana sy amin'ny ezaka kely. Raha tokony hanahy momba ny isan'ny mpanjifanao ianao, dia azonao atao ny mifantoka amin'ny famoronana horonan-tsary vaovao mahaliana izay manintona ny mpihaino anao.
Araka ny voalazan'i Aherfs, laharam-pahamehana ho an'ny mpivarotra nomerika ny laharana ambony amin'ny pejy fikarohana Google sy YouTube satria:
Ny 68 isan-jaton'ny traikefa an-tserasera dia manomboka amin'ny milina fikarohana - ny olona dia mety hahita ny horonan-tsarinao raha toa ka manana laharana ambony kokoa amin'ny milina fikarohana ianao.
Ny 75 isan-jaton'ny mpikaroka Google dia tsy mihoatra ny valin'ny pejy voalohany, ary ny 0.78 isan-jaton'ny mpampiasa ihany no manindry ny valin'ny fikarohana amin'ny pejy faharoa.
Betsaka ny zavatra azonao atao mba hampitomboana ny laharan'ny horonan-tsary YouTube ao amin'ny Google. Anisan'izany ny fitadiavana sy fampiasana ny teny fanalahidy mety (ireo no teny ampiasain'ny mpihaino anao hikaroka votoaty mitovy amin'ny anao), manampy marika YouTube, ary manatsara ny kalitaon'ny horonan-tsary YouTube. Ny fomba haingana indrindra anefa dia ny mampitombo ny isan'ny mpanjifanao.
Araka ny filazan'i Neil Patel, YouTube dia mametraka lahatsary mifototra amin'ny:
Fifandraisana amin'ny teny fototra
Ny fahatokisana indray dia mifamatotra amin'ny isan'ny mpanjifa ananan'ny fantsona YouTube iray ankoatra ny fomba fijery sy ny fahefana. Asehon'ny fanadihadiana fa ny isan'ny tia, ny fijery, ny fanehoan-kevitra ary ny fizarana ny lahatsary YouTube dia mifandray mafy amin'ny filaharana YouTube ambony kokoa. Ny antony lehibe handoavana ny mpanjifa YouTube dia ny ahafahanao mampitombo ny tiana, ny fijerinao ary ny fanehoan-kevitra amin'ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fahazoana mpanjifa tena izy sy fanitarana ny tanjonao.
Ny fantsona YouTube manana mpanjifa bebe kokoa dia mahazo toerana laharam-pahamehana amin'ny fikarohana atao amin'ny Google sy amin'ny tranokala ao amin'ny YouTube. Ny isan'ny mpanjifa ihany koa dia anton-javatra lehibe ampiasain'ny algorithm YouTube amin'ny fametrahana horonan-tsary. Raha hetsika indray mandeha ny fanehoan-kevitra na ny j'aime, ny famandrihana dia manondro fa ho hitan'ny olona tsy tapaka ny atiny video noforoninao. Izany dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny taratry ny sanda omenao ho an'ny YouTube.
Izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny YouTubers hamporisika ny famandrihana.
Na avy aiza na avy aiza ny mpanjifanao, ny fananana mpanjifa bebe kokoa dia hanampy amin'ny fanatsarana ny SEO anao. Izany dia miantoka fa ny horonan-tsarinao dia hita sy hitan'ny mpihaino betsaka kokoa. Vokatr'izany, arakaraky ny isan'ny olona mijery ny atiny, no mahabetsaka ny fikorianan'ny mpanjifa organika ho an'ny fantsona YouTube-nao.
Ny fangatahana ny olona hamela fanehoan-kevitra dia hanampy amin'ny fanatsarana ny laharan'ny horonan-tsary ao amin'ny YouTube. Ny fananganana ny fototry ny mpanjifanao no dingana voalohany amin'ny fampiharana ireo paikady ireo mba hahazoana laharana ambony.
Ampifandraiso amin'ny mpanjifanao
Ny fananana fototra mpanjifa tsara dia mampitombo ny fahatokisanao raha vao manomboka ho YouTuber ianao. Ity dia azo ampiharina ihany koa ho an'ireo izay namorona horonan-tsary YouTube nandritra ny fotoana ela nefa tsy nahavita nanangana ny fototry ny mpanjifany.
Raha vantany vao manana mpanjifa be dia be ianao, dia ho voatosika hanampy votoaty vaovao tsy tapaka. Manaova horonan-tsary momba ny zavakanto, mozika, fitsangatsanganana, sakafo, na asanao mba handraisanao ny tena mpanjifanao.
Afaka manao horonan-tsary manokana ianao avy eo mba handraisanao ireo tena mpanjifanao ary hahatonga azy ireo hahatsapa ho sarobidy sy manokana. Ny fampidirana mari-drano tany am-boalohany amin'ny horonan-tsaryo dia tsy hiaro ny horonan-tsarinao fotsiny fa ahafahan'ny mpijery manindry azy sy misoratra anarana amin'ny fantsonao. Ny bokotra misoratra anarana dia miseho ho azy eo amin'ny mari-drano voalohany anao.
Ny fandraisana anjara amin'ny mpanjifanao dia tafiditra amin'ny fanaovana horonan-tsary mahaliana azy ireo. Ireto misy antontan'isa avy amin'ny HubSpot izay mampiseho ny karazana atiny tian'ny mpijery YouTube:
Lahatsary mozika dia iray amin'ireo malaza indrindra ao amin'ny YouTube.
Ny horonan-tsary mifandraika amin'ny fiantsenana dia nanana ora fijerena avo dimy heny tato ho ato.
YouTube dia mampahafantatra ny 70 isan-jaton'ny mpijery ny marika.
Ny mpijery dia avo roa heny noho ny mividy vokatra nojereny tao amin'ny YouTube.
Raha oharina amin'ny sehatra hafa, ny mpijery dia mitady vaovao momba ny serivisy, vokatra, na marika ao amin'ny YouTube.
Ny horonan-tsary fampianarana ao amin'ny YouTube dia tian'ny mpampiasa YouTube noho ny famakiana ny torolàlana momba ny vokatra na ny torolàlana.
Ny antony lehibe indrindra hijerena ny YouTube dia ny mahatsiaro ho miala voly sy miala sasatra.
Nitombo 70 isan-jato tamin'ny fotoana nijerena ny horonan-tsary fialamboly toy ny fanapahana savony.
Hatsikana sy horonan-tsary "fomba ahoana" no sokajy votoaty YouTube malaza hafa.
Ampitomboy ny algorithm YouTube
Ny algorithm YouTube dia voafaritra ary manapa-kevitra manakaiky ny telo ampahefatry ny horonan-tsary hitan'ny mpijery YouTube. Ny tolo-kevitry ny YouTube dia mifototra amin'ny metrika maro toy ny mpanjifa, tantaran'ny mpijery, ny fotoana ijerena, ny maha-zava-dehibe, ary ny firotsahana. Ny antony lehibe hividianana mpanjifa dia ny mety hanoro hevitra ny horonan-tsary ho an'ny mpijery bebe kokoa ny algorithm.
Mora sy haingana ny fividianana mpanjifa YouTube
Raha toa ianao ka miahiahy momba ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana tranokala mety hividianana subs, ity no vahaolana tsotra. YTpals dia tranonkala malaza amin'ny mividy mpanjifa YouTube. Afaka manantena valiny haingana ianao ary dingana iray amin'ny fividianana. Azonao atao ny mividy ny mpanjifa YouTube 50 voalohany amin'ny $ 20, raha toa ka $ 5000 ny fijerena 60.
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny fijerena YouTube maimaim-poana hanarahana haingana ny lalanao amin'ny fananganana ny fototry ny mpanjifanao, ny tia, ny fanehoan-kevitra ary ny fizaranao.
YTpals koa dia manana vidiny mifaninana amin'ny tiana, fanehoan-kevitra, ora fijerevana ary fizarana YouTube izay afaka mampitombo ny paikadin'ny varotra YouTube anao. Rehefa mandoa vola ho an'ny mpanjifa ianao dia hanomboka handray azy ireo ao anatin'ny 24 ora. Raha vantany vao hitanao ny tombony azo tsapain-tanana amin'ny fahazoana mpanjifa ao amin'ny YouTube, dia azonao atao ny mampitombo tsikelikely ny isan'ny mpanjifa ho 100, 500, na mihoatra.
Raha te hividy fanehoan-kevitra ianao, YTpals dia manolotra fanehoan-kevitra mahazatra ho an'ny vidiny mora. Afaka mividy fanehoan-kevitra mahazatra folo avy hatrany ianao ho an'ny horonan-tsary YouTube nampidirinao amin'ny vidiny mora. Azonao atao ihany koa ny mividy fanehoan-kevitra 30 na 50 amin'ny vidiny mifaninana. Raha resaka tia, YTpals dia manolotra tia YouTube 200 amin'ny $20.
Ny fividianana azy rehetra ho amboara dia hanome ny fototra mafy ilainao hitondrana ny fantsona YouTube anao amin'ny ambaratongam-pahombiazana vaovao.
Jereo izay lazain'ny mpanjifantsika rehefa mividy mpanjifa YouTube izy ireo
Ny Mpanjifa YouTube dia nampiana ho an'ny saretyo.